स्वास्थ्य Archives - Like For Nepal
खोप लगाएपछि हल्का रुघाखोकी लागेको थियो । बिसन्चो महशुस भएपछि ३५ वर्षीया कल्पना बुढाले शुक्रबार साँझ खाना पनि खाइनन् । रात परेपछि उनी आफ्ना दुई छोरा र एक भदैसहित सुत्ने कोठाभित्र पसिन् । जाडो महशुस गरेकी उनले कोठामा तातो होस् भनेर झ्यालढोका नै बन्द गरिन् । अनि तसलामा कोइला बालेर सुतिन् । तर शुक्रबार राती एउटै कोठामा सुतेका चारैजना फेरि ब्यूँझि नै पाएनन् । वीरेन्द्रनगर–१० बुदबुदीमा रहेको आफ्नै घरमा सुतेका कल्पना, उनका छोराहरु निरज र चिरिञ्जीवी तथा भदा सोमराज शनिबार बेलुकी मृत भेटिए । घरमा कल्पनाका ससुरा वीरबहादुर विसी पनि थिए । तर उनी शनिबार बिहानै घरबाट आफ्नो काममा निस्किए । बेलुकी घर आउँदा वीरबहादुरले आफ्ना नातीहरुलाई देखेनन् । घर पनि सुनसान देखे । नातीहरु नदेखेपछि उनी हतारिँदै बुहारी कल्पना सुत्ने कोठातर्फ गए । तर कोठाको ढोका नै खुलेन । झ्याल पनि बन्द भएपछि उनले आत्तिदै छिमेकीहरु बोलाए...
कोरोना संक्रमण भएपछि शरीरमा के हुन्छ ?
गत डिसेम्बर महिनामा पहिलो पटक भेटिएको नयाँ कोरोनाभाइरस र यसले लगाउने रोग कोभिड-१९ अहिले विश्वव्यापी महामारी बनिसकेको छ। कसैकसैमा यो रोगले सामान्य प्रभाव मात्रै पार्छ भने केहीमा यो रोग मृत्युको कारण बनिदिन्छ। यो नयाँ भाइरसले कसरी शरीरमा आक्रमण गर्छ? यसका कारण किन मानिसको ज्यान जान्छ? यसको उपचार कसरी भइरहेको छ त ? सङ्क्रमणकाल मानिसको शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि भाइरस फैलिन र स्थापित हुन केही समय लाग्छ। त्यसलाई ‘इन्क्युबेशन पीरीअड’ अथवा सङ्क्रमणकाल भनिन्छ। त्यो बेला भाइरसहरूले तपाईँको शरीरमा कोषभित्र पसेर तिनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने गर्छन्। यदि नजिकै कसैले खोकिरहेको छ भने तपाईँले सास फेर्दा कोरोनाभाइरस (औपचारिक नाम Sars-CoV-2) शरीरमा पस्न सक्छ। दूषित वस्तु वा सतह छोएर आफ्नो अनुहार छुँदा पनि कोरोनाभाइरस शरीरमा छिर्न सक्छ। त्यसले पहिला तपाईँको घाँटीभित्रका कोष, सासनली र फोक्सोलाई असर गर्न...
एकजना अमेरिकी शिक्षिकाले विमानमा उडिरहेका बेला को-रोना सं’क्रमित भएको थाहा पाएपछि शौचालयमै ५ घण्टा बिताएको बताएकी छिन्। गत डिसेम्बर २० मा आइसल्यान्ड एयरमार्फत अमेरिकाको सिकागोबाट आइसल्यान्ड को रिक्याभिकको यात्रा गरिरहेका बेला मारिसा फोसियोले आफूलाई विमानको शौचालयमै आइसोलेट गरेकी हुन् । विमानमा घाँटी दुखेपछि उनले आफूसँगै ल्याएको र्‍यापिड टेस्ट किटमार्फत को-भिड परीक्षण गरेकी थिइन् । परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएपछि उनले बाँकी यात्रा शौचालयमै बसेर पूरा गरेको बताएकी छिन् । विमान परिचारिकाले शौचालयमै उनलाई खाना र पेय पदार्थ उपलब्ध गराएकी थिइन्। विमान चढ्नु अघिनै उनले को-भिड परीक्षणको रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने अवस्था थियो/ थिएन भन्नेबारे भने अहिलेसम्म केही खुलेको छैन । ‘यो एउटा अद्भुत अनुभव थियो,’ मिसिगनकी स्थायी बासिन्दा फोसियोले एनबीसी न्युजसँग भनिन्, ‘विमानमा १५० जना यात्रु थिए । अरुलाई सं’क्रमण हुन्...
उच्च शिक्षाको लागी संयुक्त राज्य अमेरिका पुगेका २९ वर्षिय विशाल कुमार गौतमलाई बोनम्यारो क्यान्सर भएको छ । उनि इन्जिनियरिङका विद्यार्थी हुन् । काठमाडौंस्थित टोखा-७ निवासी विशाललाई करिव २ महिना अस्पतालमा उपचारपछि Primary Myelofibrosis भनिने दुर्लभ बोनम्यारो क्यान्सर भएको पत्ता लागेको छ । जसको उपचारका लागी साढे ७ लाख अमेरिकी डलर लाग्ने अस्पतालले जनाएको छ । उनको अहिले Mayo Clinic Hospital Rochester, Minnesota USA मै उपचार भैरहेको छ । धेरै औषधी उपचार गरेपछी पनि रगत मा सुधार नआएकोले उनलाई तत्कालै Bone Marrow Transplant गर्नुपर्ने उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएको भाइ विराट कुमार गौतमले जानकारी दिए बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्टका लागी साढे सात लाख अमेरिकी डलर लाग्ने भनिएको छ । यति ठुलो रकम जुटाउन परिवारमा मात्रै समस्या भएको भन्दै भाई विराटले दाईको उपचारमा सहयोग गरिदिन अपिल गरेका छन् । विरा...
ओमिक्रोन संक्रमित पहिलो ब्यक्तिको मृ त्यु !
कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको जोखिम विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको छ। हालसम्म विश्वका ६० भन्दा बढी देशमा यो नयाँ रूपका संक्रमित फेला परेका छन् । यद्यपी यसबाट मृत्यु हुनेको संख्या अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । एक दिन अघि, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले ओमिक्रोनबाट संक्रमित पहिलो व्यक्तिको मृत्युको पुष्टि गरे। त्यसबेलादेखि, ओमिक्रोनको फैलावटको बारेमा विश्वभर हलचल भएको छ। यद्यपि, वैज्ञानिकहरूले यो डरलाई बेलायती सरकारको गलत बयान भनेका छन् । विज्ञहरूले भनेका छन् कि पीएम जोन्सनले ओमिक्रोनवाट संक्रमित व्यक्तिको मृत्युको धेरैजसो जानकारी लुकाएको छ। वैज्ञानिकहरूले बेलायती सरकारलाई ओमिक्रोनको पहिलो मृत्युको बारेमा सकेसम्म धेरै जानकारी उपलब्ध गराउन अपील गरेका छन्। जस्तो कि उनले कोभिडको भ्याक्सिनका दुवै खोपहरू पाएका थिए की थिएनन् । अथवा उनी कमजोर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भएका ब्यक्ति थिए की...
नेपालमा पनि ओ’मिक्रोन पु;ष्टिभएसंगै एकै दिन परिवारका ९ जना सहित १७ जनामा देखियो ओ’मिक्रोन
अ‌ाएका र उनहरुको स-म्प-र्क-मा रहेका व्यक्तिमा ओ-मि-क्रो-न देखिएको छ । यसअघि कर्नाटकमा दुई जनामा र गुज्रात तथा दिल्लीमा एक एक जनामा ओ’मि’क्रो’न दे-खि-ए-को थियो । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***** अहिलेसम्म अमेरिका अस्ट्रेलिया बेलायत नेदरल्यान्डसहित २५ देशमा ओमिक्रोन दे-खि-ए-को छ । एकै परिवारका ९ जनामा को-रो-ना-को न’याँ भे-रि-य-न्ट ओ’मि’क्रो’न देखिएको स-मा-चा-र सा’र्ब’ज’नि’क भएको छ । राजस्थानमा ९ जनामा ​​ओ’मि’क्रो’न सं-क्र-म-ण पु’स्टि भएको हो । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***** वि’भा’ग’ले दक्षिण अ-फ्रि-काबाट आएका परिवारलाई आ’र’यू’ए’च’ए’स’मा भ-र्ना गरिसकेको चि’कि’त्सा स-चि-व-ले बताए। दक्षिण अफ्रिकाको राज्यमा उनको सम्पर्कमा आएका अन्य ५ जनामा ​​पनि सं-क्र-म-ण देखिएको छ । उनीहरुलाई पनि आ-र-यू-ए-च-ए-स-मा भ’र्ना गरिएको छ । ***...
केप टाउन / काेभिडकाे नयाँ भेरियन्ट ओमिक्राेन देखिएपछि दक्षिण अफ्रिकाका अस्पतालहरु बिरा’मीले भरिएका छन् । अस्पतालमा बिरामी भरिएपछि दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति साइरिल रामापाेसाले सम्पूर्ण नागरिकहरु’लाई खाे’प लगाउन आ’ह्वान गरेका छन् । यसअघि दैनिक १६ हजार संक्रमित भेटिने गरेकाेमा पछिल्लाे २४ घन्टामा दक्षिण अफ्रिकामा २३ हजार सं’क्रमित भेटिएका छन् । दक्षिण अफ्रिकाकाे स’रुवा राेगका लागि राष्ट्रिय संस्था (एनआइसीडी) का अनुसार पछिल्लाे समयमा सं’क्रमणमा भएकाे बृद्धि अ’प्रत्या’सित हाे । देश काेभिडकाे चाैथाे ल’हरमा प्रवेश गरिसकेकाे स्वास्थ्य अधिकारीहरुले बताएका छन् । ‘दु’र्भाग्यवश अहिले दैनिक अस्पताल भर्ना हुने बिरामीकाे संख्या दाेब्बरले बढेकाे छ,’ सं’क्रमक राेग विज्ञ इयान साने भन्छन् । संक्र’मितकाे संख्यामा बृद्धि भएकाेले त्यसका लागि तयारी हुन उनले अस्पताललाई आग्रह गरेका छन् । अस्पता...
सङ्क्रमणबाट नुवाकोटमा हट्टा कट्टा महिलाको मृ त्यु, भाइरसको नयाँ भेरियन्ट नेपालमा पनि देखियो
नुवाकोट । नुवाकोटमा थप एकजना संक्रमितको मृ त्यु भएको छ । मृ त्यु हुनेमा लिखु गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का ४५ वर्षिय एक महिला रहेको स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ । उनको शनिवार त्रिशुली अस्पतालमा मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटका सुचना अधिकारी उत्तमराज खनालले जानकारी दिए । यससँगै नुवाकोटमा संक्रमणबाट मृ त्यु हुनेको संख्या ५२ पुगेको छ नुवाकोटमा हालसम्म ८ हजार ३ सय ७७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमितमध्ये ८ हजार ३ सय ८ जना कोरानामुक्त भएर घर फकिएका छन् । जिल्लामा हालसम्म २८ हजार ६ सय ७४ जनाको पिसिआर परिक्षण गरिएको छ । नुवाकोटमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या १७ पुगेको छ । सक्रिय कोरोना संक्रमितमध्ये १५ जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् । यस्तै, नेपालमा पनि भाइरसको नयाँ भेरियन्ट पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै दुई जन...
एकै परिवारका ९ जना सहित एकै दिन १७ जनामा देखियाे ओ मिक्राेन
भारतमा एकै दिन १७ जनामा काेभिडकाे नयाँ भेरियन्ट अ‌ाेमिक्राेन भाइरस देखिएकाे छ । पछिल्लाे २४ घन्टामा राजस्थानमा नाै र महाराष्ट्रमा अ‍ाठ जनामा ओमिक्राेन देखिएकाे हाे । याेसँगै भारतमा ओमिक्राेनबाट संक्रमित हुनेकाे संख्या २१ जना पुगेकाे छ । भारतमा दक्षिण काेरियाबाट अ‌ाएका र उनहरुकाे सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिमा ओमिक्राेन देखिएकाे छ । यसअघि कर्नाटकमा दुई जनामा र गुज्रात तथा दिल्लीमा एक एक जनामा ओमिक्राेन देखिएकाे थियाे । अहिलेसम्म अमेरिका अस्ट्रेलिया बेलायत नेदरल्यान्डसहित २५ देशमा ओमिक्राेन देखिएकाे छ । एकै परिवारका ९ जनामा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन देखिएको समाचार सार्बजनिक भएको छ । राजस्थानमा ९ जनामा ​​ओमिक्रोन संक्रमण पुस्टि भएको हो । विभागले दक्षिण अफ्रिकाबाट आएका परिवारलाई आरयूएचएसमा भर्ना गरिसकेको चिकित्सा सचिवले बताए। दक्षिण अफ्रिकाको राज्यमा उनको सम्पर्कमा आएका अन्य ५ जनामा ​​प...
तीनवटा कोभिड केश भेटिएपछि उडानहरू रद्द गरियो, विद्यालयहरु बन्द
एजेन्सी । चीनले आफ्नो कडा शून्य–कोभिड नीति जारी राखेको कारण शंघाईमा तीन कोरोनाभाइरसका घटनाहरू भेटिएपछि सयौं उडानहरू रद्द गरियो, केही विद्यालयहरू बन्द गर्नुको साथै भ्रमण समूहहरू शुक्रबार रद्द गरिएको छ। बेइजिङले यात्रा प्रतिबन्धहरू र कडा रुपमा गरिएका लकडाउनका कारण आफ्नो सिमानामा कोरोनाभाइरसको फैलावटलाई नियन्त्रण गर्न धेरै हदसम्म सफल भएको छ । साघांइबाट नजिकै पर्ने शहर सुझाउबाट फर्किएका तीन व्यक्तिमा कोरोनाको सङ्क्रमण देखा परेको जनाइएको छ। बिहीबार साँझ जारी एक पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य अधिकारीहरूले कोरोना सङ्क्रमण भएका यी तीन जनाले नै पूर्ण मात्रा खोप लगाएका जानकारी दिइएको छ । शुक्रबार सांघाईका दुई प्रमुख विमानस्थलबाट ५०० भन्दा बढी उडानहरू रद्द गरिएका सम्बन्धित अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।...